Nnwom 113 NA-TWI - Awurade nkamfo - Kamfo Awurade! Mo - Bible Gateway
Nnwom 112Nnwom 114
Nnwom 113 Nkwa Asem (NA-TWI)
113 Kamfo Awurade! Mo Awurade asomfo, monkamfo ne din! 2 Wɔbɛkamfo ne din nnɛ ne daa nyinaa. 3 Monkamfo Awurade din mfi apui nkosi atɔe. 4 Awurade di aman nyinaa so; n’anuonyam boro ɔsoro so.